के हुन्छ यदि मैले कसैलाई व्हाट्सएपमा रोक्दछु: ब्लकि ofको नतिजा | ग्याजेट समाचार
यदि त्यहाँ एक सन्देश अनुप्रयोग छ जुन आज ठूलो संख्यामा छन्, यो व्हाट्सएप हो। फेसबुक को स्वामित्वको अनुप्रयोग को लागी प्रयोगकर्ता को मनपर्ने विकल्प हो तपाईंको साथी र परिवारको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस् साधारण तरिकामा। दुर्भाग्यवस, तपाईसँग अनुप्रयोगमा कुराकानीहरू सधैं रमाईलो हुँदैनन्। त्यहाँ कोही त्यस्तो मानिस हुन सक्छ जसले तपाईलाई दिक्क बनाइरहेको छ।
त्यसो भए जब त्यो हुन्छ, सम्पर्क ब्लक गर्न विकल्प प्रयोग भएको छ। हामीसँग अर्को अनुप्रयोगमा जस्तै समान विकल्प छ, जस्तै सामाजिक नेटवर्क। एक प्रयोगकर्ता व्हाट्सएप मा अवरुद्ध छ जब के हुन्छ? यसको कस्तो नतिजा हुन्छ?
1 व्हाट्सएपमा सम्पर्क ब्लक गर्नुहोस्
2 के हुन्छ जब मैले कसैलाई व्हाट्सएपमा रोक्दछु
3 WhatsApp मा सम्पर्क अनब्लक कसरी गर्ने
व्हाट्सएपमा सम्पर्क ब्लक गर्नुहोस्
ब्लक गर्न को लागी विकल्प केहि हो जुन रिसोर्ट गरिएको छ जहाँ अवस्थामा त्यहाँ कुनै पनि सम्पर्क छ जुन तपाईलाई पिरोलिरहेको छ। यस्तो हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो पार्टनरसँग सम्बन्ध तोड्नु भएको छ, र उनले तपाईंलाई सन्देश पठाउन रोक्दैनन्, केही नचाहानुहोस्। वा कि तपाईले कुनै खास व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न रोक्नुभएको छ, त्यसैले यसलाई व्हाट्सएपमा सम्पर्कको रूपमा राख्नुको कुनै अर्थ छैन। यस प्रकारको स्थितिमा व्यक्तिलाई रोक्ने सम्भावना प्रयोग भएको छ।
कसैलाई रोक्नको लागि तपाईले यस व्यक्तिलाई व्हाट्सएप भित्र खोजी गर्नुपर्नेछ। यो हुन सक्छ कि तपाईं उनीसँग खुल्ला कुराकानी गर्नुभयो, त्यसपछि कुराकानी प्रविष्ट गर्नुहोस्। स्क्रीनको शीर्षमा तिनीहरूको नाम क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं त्यसपछि अनुप्रयोगमा त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्। तल धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जस मध्ये एक ब्लक गर्न सक्षम हुनु हो यस व्यक्तिलाई सिधा। यस तरिकाले अवरुद्ध गरिएको छ भने।
यदि हामी व्हाट्सएप सेटिंग्स, खाता सेक्सनमा र त्यसपछि गोपनीयतामा प्रविष्ट गर्छौं, हामीसँग त्यहाँ सबै सम्पर्कहरूको सूची छ जुन हामीले अनुप्रयोगमा ब्लक गरेका छौं। त्यसोभए यो सम्भव छ कि हामीले जुनसुकै बेला अनुप्रयोगमा अवरुद्ध गरेका मानिसहरुमा राम्रो नियन्त्रण हुनु पर्छ। यो जानकारी पाउनको लागि धेरै सरल र सहज छ।
कसरी जान्ने यदि तपाईंलाई व्हाट्सएप 2019 मा ब्लक गरिएको छ
के हुन्छ जब मैले कसैलाई व्हाट्सएपमा रोक्दछु
व्हाट्सएपले हामीलाई चाहिएको सबै सम्पर्कहरू ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ। यस सम्बन्धमा कुनै सीमा छैन, त्यसैले यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, यो सन्देश अनुप्रयोगमा तपाईंको सबै सम्पर्कहरू ब्लक गर्न पनि सम्भव छ। यद्यपि, अनुप्रयोगमा सम्पर्क रोक्नको तथ्यको परिणामहरूको एक श्रृंखला छ जुन ध्यानपूर्वक लिनुपर्दछ, किनकि तिनीहरूले अनुप्रयोगको अपरेसनलाई असर गर्छन्, वा मानिससँग कुराकानी गर्न।
एउटा चीजको लागि, यदि तपाईंले अनुप्रयोगमा कसैलाई रोक्नुभयो भने, तपाईं भने व्यक्ति संग सम्पर्कमा हुन सक्षम हुनुहुने छैनलाई जसले तपाईंलाई दिक्क लगाउँदछ उसलाई रोक्नको फाइदा यो हो कि यस व्यक्तिले तपाईंलाई सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुँदैन। तिनीहरू अनुप्रयोग प्रयोग गरेर तपाईंसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुँदैनन्। त्यसोभए उसको कुनै सन्देशहरू तपाईंमा पुग्न सक्दैन, न त उनले पठाउने फाईलहरू वा यदि उसले तपाईंलाई अनुप्रयोग मार्फत कल गर्न खोज्यो भने यो सम्भव पनि हुँदैन। कुनै पनि हिसाबले यी दुई बीच कुनै सञ्चार छैन। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको लागि पनि हो। तपाईं यस व्यक्तिलाई सन्देश पठाउन सक्षम हुनु हुने छैन।
साथै, तपाईले देख्न सक्नुहुने छैन जब यो व्यक्ति अनुप्रयोगमा (अनलाइन) जडित छ। यो सम्पर्क अवरुद्ध छ, WhatsApp सबै समयमा यो जानकारी देखाउन रोक्छ। त्यसोभए तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्न कि यो अनलाईन हो कि भनेर, न त तपाईं अन्तिम पटक यो व्यक्ति अनलाइन थियो देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यस व्यक्तिको प्रोफाइल फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्न, हालसम्म सम्भव थियो। जे होस् यदि यो व्यक्तिले उनीहरूको प्रोफाइल तस्वीर परिवर्तन गर्दछ भने, परिवर्तन तपाईलाई देखिने छ। त्यसोभए तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको विपरित, अर्को व्यक्ति कुनै पनि समयमा तपाईंको प्रोफाइल फोटो हेर्न सक्षम हुनेछ।
व्हाट्सएपमा अनलाइन कसरी देखा पर्दैन
यदि तपाईं व्यक्तिसँग वा व्हाट्सएपमा भएको समूहमा हुनुहुन्छ भने, यस व्यक्तिले पठाईएको सन्देश तपाईलाई देखिने छैनन्। यस व्यक्तिले के लेख्छन् तपाईले देख्न सक्नुहुने छैन, न त उनी यो समूह च्याटमा के लेख्छन् देख्न सक्षम हुनेछन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन यस तरीकाले राखिनेछ, जब सम्म तपाईं त्यस व्यक्तिलाई अनब्लक गर्ने निर्णय गर्नुहुन्न। अन्यथा यी सन्देशहरू देखिने छैनन्। न त यदि च्याटमा फाईलहरू पठाइयो भने तिनीहरू देख्न सकिन्छ।
WhatsApp मा सम्पर्क अनब्लक कसरी गर्ने
यो सम्भव छ कि केहि समय पछि त्यो व्यक्ति व्हाट्सएपमा अनब्लक गर्नको लागि निर्णय गरिएको हो। यो हुन सक्छ कि उनीसँग कुनै समस्या छैन वा तपाईंलाई थाहा छ कि उसले अब तपाईंलाई सम्पर्क गर्न खोज्दिन। जे भए पनि, यदि अनलक गर्ने निर्णय भएको छ भने, अनुप्रयोगले यस सम्बन्धमा केही विकल्पहरूको अनुमति दिन्छ। दुबै धेरै सरल र छिटो।
एकातिर, यो सूचीबाट गर्न सम्भव छ जहाँ तपाईं अवरूद्ध सम्पर्कहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईंले अनुप्रयोग सेटिंग्स प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि खाता सेक्सनमा। यस भित्र तपाईले गोपनीयता प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ खण्ड जहाँ अवरुद्ध सम्पर्कहरूको एक सूची छ। त्यसो भए, हामीले सूचीमा त्यस व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्नेछ, तिनीहरूको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यस व्यक्तिलाई अनलक गर्न सकिन्छ।
WhatsApp मा कसरी सम्पर्क ब्लक गर्ने
अर्को तरीका यो व्यक्तिमा व्हाट्सएपमा तपाईका सम्पर्कहरू बीचमा खोजी गर्नु हो। सम्पर्कहरूको सूचीमा तपाईंले यो व्यक्ति देख्नुहुनेछ र तिनीहरूको नाम मुनि यसले यो देखाउँदछ कि यो सम्पर्क हो जुन तपाईंले अवरुद्ध गर्नुभएको छ। त्यसो भए यसलाई अनलक गर्न तपाईले यसको नाममा क्लिक गर्नुपर्नेछ। एउटा सानो विन्डो त्यसपछि देखा पर्नेछ जुनमा सोचौं यदि हामी यस सम्पर्कलाई अनब्लक गर्न चाहन्छौं। जस्तो तपाई यस केसमा चाहानुहुन्छ, तपाईले त्यो विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यो सम्पर्क अनलक गरिएको छ।
यस तरिकामा, जब हामी अनब्लक गरियो भने वाट्सएपमा सम्पर्क, यसको मतलब अब हामी एक अर्का सन्देशहरू पठाउन सक्दछौं यस व्यक्तिको साथ। अतः संचार फेरि सामान्य हुनेछ, जस्तो कि यो विगतमा थियो। यदि यस व्यक्तिले तपाईलाई सन्देशहरू लेख्ने प्रयास गरेको थियो जब तपाईले तिनीहरुलाई रोक्नु भएको थियो, यी सन्देशहरु तपाईमा पुग्न सक्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » के हुन्छ यदि मैले कसैलाई व्हाट्सएपमा रोक्दछु